गुगल म्यापमा अब सगरमाथा बेसक्याम्प हेर्न सकिने
Aakar March 19, 2013
सगरमाथाको देशमा बसेर अहिलेसम्म, सगरमाथा त के आधार शिविर सम्म नि पुग्न सकियाहैन । अब बेसक्याम्प हिँडेरै नपुगिएपनि गुगल म्याप मार्फत भने पुग्न सकिने भएकोछ । गुगलले संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर सहित दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, युरोप लगायतका अग्ला चुचुराहरुको ३६० डिग्री फोटो गुगल म्यापमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरेकोहो । Mount Everest Basecamp गुगलको ब्लग अनुसार गुगल म्यापमा नेपालको तेङ्बोचे गुम्बा तथा सगरमाथा वेसक्याम्पको ३६० डिग्री तस्विर हेर्न सकिन्छ । सन् २०११ मा सगरमाथा बेसक्याम्प घुम्न आएका गुगलरहरुको एक समूहले १२ दिन लगाएर सगरमाथा वेसक्याम्प, नाम्चेबजार तथा तेङ्बोचे गुम्बाको फोटो लिएकाथिए । Tengboche Monastery Mount Everest Base Camp Street View on Google Maps View Larger Map Tengboche Monastery Street View on Google Maps View Larger Map Kala Patthar Street View on Google Maps View Larger Map Mudslide bridge Street View on Google Maps View Larger Map Namche Bazaar Street View on Google Maps View Larger Map Googlers Team at Mount Ev
गुगल रिडरका ३ विकल्पहरु
Aakar March 17, 2013
सन् २००५ देखि सञ्चालनमा रहेको गुगल रिडर आउँदो जुलाई १, २०१३ देखि बन्द हुने भएकोछ । पछिल्लो वर्षहरुमा गुगल रिडरको प्रयोग घटेको बताउँदै सर्च जायन्ट गुगलले केहि दिन अघि रिडर बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै इन्टरनेटमा गुगलको घोषणाको विरोधमा आवाजहरु उठिरहेकाछन् । केही साइटहरुले गुगल रिडर बन्द गर्ने गुगलको घोषणाको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेकाछन् । डिग, जाइट जस्ता सोसल बुकमार्किङ साइटले गुगल रिडर जस्तै रिडर चाँडै निर्माण गर्नेभएकाछन् भने केही साइटहरुले यो समयलाई आफ्नो रिडरको मार्केटिङमा प्रयोग गरिरहेकाछन् । गुगलको घोषणा सँगै रिडरका प्रयोगकर्ताहरु रिडरको विकल्प खोज्न थालेकाछन् । अष्ट्रेलियाबाट एकजना अपरिचित साथी मुरुजीले फोन गरेर गुगल रिडरको विकल्पका बारेमा बुझ्न खोजेपछि यो ब्लग नलेखिरहन सकिन । १) द ओल्ड रिडर द ओल्ड रिडरललाई गुगल रिडर नै भन्दा फरक पर्दैन । ओल्ड रिडरमा साइन इन गरेर आफूलाई मन परेका साइटहरुको फिड राखेर अनलाइनमा पढ्न मिल्छ । गुगल रिडरबाट डाउनलोड गरेको फिडलाई सिधै ओल्ड रिडरमा इम्पोर्ट पनि गर्न सकिन्छ । ओल्ड रिडरलाई गुगल रिडरको उत्तम विकल्पको रुपमा मान्न सकिन्छ । २) फिड
Pivot Nepal – A Call for Nepali Mobile Apps Developer #pivotnepal
Aakar March 05, 2013
MobileNepal is organizing Pivot Nepal - A competition for mobile app developers and other mobile enthusiasts to bring forward their creative and innovative mobile app ideas, products and prototypes that has the potential to stand out asasustainable business in itself. If you have some killer mobile app ideas and concepts that you think will work in Nepalese context and has the potential to be scaled up at an International level this is the right avenue for you to submit your idea and take it forward. At the same time, if you already have conceived and developed mobile app and are looking to develop business around it, this is the right place for your to submit your concept and take it forward. The competition has started from February 25, 2013 and will continue till April 26, 2013. Teams will be able to submit their idea in any of the three categories - Social Development, Utilities and Entertainment and Business and Financial Services through the website . Top5submis
सँधै राजनितिको कुराले तात्ने सोसल नेटवर्कहरुमा २-३ दिन यता नेपाल प्रहरीको नयाँ हर्कतले तातेकोछ । अपराध नियन्त्रणको निहुँमा कपाल पाल्ने, मुन्द्रा लाउनेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै कारवाही गर्न थालेकोछ । समाचार अनुसार “नियन्त्रणमा लिएकाहरुको नाम, थर, वतन, हुलिया, औठाछाप, फोटो राख्ने कार्य सुरु गरिएको छ। लामो अशोभनिय कपाल पालेकाको कपाल काटिएको छ तथा, अब उपरान्त त्यस्ता प्रकारको गतिविधि पहिरन र हुलिया बनाइ नहिँड्ने चेतावनी दिइकोछ।” नेपाल प्रहरीको ज्यादतिको विरोधमा फेसबुकका भित्ताहरु स्टाटस र फोटोहरुले भरिएकाछन् । प्रहरीको अभियान देखेर आफैँलाई लाज लागेकोछ । राजनैतिक दलहरुका वरपर रहेका डनहरु, अपराधिहरु खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेकाछन्, तर प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गर्ने निहुँमा लामो कपाल भएका युवाहरुको कपाल काट्ने अभियान थालेकोछ । संगठित अपराधीहरुबाट जनताले दु:ख व्यहोरीरहेका बेला, जनताको ध्यान मोड्न र पपुलिस्ट हुन, एउटा “वाहियात” अभियान सञ्चालन गरिरहेछ । आफ्नो असक्षमता ढाक्न कपाल लामो भएका युवाहरु अपराधी हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न लागिपरेकाछन् । केही समय पहिले भारतमा, एकजनाले “चाउमिनका कारण बलत
Bulbul : Episode - 183
Aakar February 27, 2013
Listen to Bulbul Episode-183 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul Episode-183
Bulbul : Episode - 182
Aakar February 20, 2013
Listen to Bulbul Episode-182 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul Episode-182
Aakar February 19, 2013
गत वर्ष डिसेम्बरमा ट्विटरले, प्रयोगकर्ताले आफ्ना पुराना ट्विटहरु डाउनलोड गर्न सक्ने सुविधा घोषणा गर्दै थोरै व्यक्तिहरुलाई ट्विट डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएकोथियो । यो हप्ता मैले पनि आफ्ना पुराना ट्विटहरु हेर्ने सुविधा पाएँ । आफ्नो सबैभन्दा पहिलो ट्विट के होला, भन्ने कौतुहलता थियो, त्यो पनि पुरा भयो । ८५ एमबिमा अटाएका मेरा करिब ५९ हजार ट्विटहरु एकैपटक आफ्नो कम्प्युटरमा पाउँदा, एउटा बेग्लै किसिमको रमाइलो लाग्यो, किनकी ती प्रत्येक ट्विटहरुले मेरा पछिल्ला चारवर्ष कसरी बित्यो भन्ने कुरा देखाउँछ । मैले विर्सिएका कतिपय आफ्ना व्यक्तिगत घटनाहरु पनि, आँखा अगाडी आए । ती साना साना कुराले कति फरक पार्दोरहेछ भन्ने कुरा ति ट्विटहरु हेर्दा आज थाहा भयो । ट्विटर मेरो पलपलको खबर राख्ने अनलाइन डायरी भएको रहेछ । ट्विटरमा साथी कोही नहुँदा, कस्तो र कसरी ट्विट गरिएको रहेछ, अनि कहिले साथी भेटिए, अनि त्यसपछि ट्विटहरु कस्ता भए, मेरो दैनिकी कस्तो रह्यो, ती सबैकुराहरु आफ्ना अगाडी आए । विश्वकप फुटबल हुँदाताको फुटबलमय ट्विटर र तिजको बरिलै टपिक हेरेर अहिले पनि हाँसियो ! ट्विटिएका लिंक हेरेर आफूले अहिलेसम्म कति ब्ल
Aakar February 17, 2013
पछिल्लो समयमा आएर धेरै साथीहरुको गुनासो छ, ब्लग अपडेट भएन । ब्लगमा किन नयाँ केही नलेखेको? मेरो पनि यही गुनासो छ, ब्लग किन अपडेट भएन? अफिसका कारण समय छैन, शनिबार र आइतबारको दिन पनि काममै बित्छ । कहिले बत्ति हुँदैन त कहिले इन्टरनेट । कहिले थकाइ लागेको हुन्छ, त कहिले लेख्ने मुड हुँदैन, आदि आदि ।एउटी साथीको गुनासो पनि छ, हिजोआज च्याटमा पनि भेटघाट हुँदैन । फुर्सद त पहिले पनि हुँदैनथियो, तर पनि बोल्न त भ्याइन्थ्यो, अहिले त त्यो पनि छैन । कुनै दिन दह्रो झटारो हानाहान पर्ला जस्तो छ, च्याट मै । कहिलेकाँही सोच्छु, कहिँ म चाहिने भन्दा बढि नै व्यस्त भइरहेको त छैन । कतै म आफैँसँग बहानाबाजी त गरिरहेको छैन । खै, तर किनकिन आफूसँग फुर्सदको समय नै छैन जस्तो लाग्छ । जुनबेला फुर्सद छ जस्तो लाग्छ, त्यतिबेला बत्ति हुँदैन । जब बत्ति हुन्छ, तब इन्टरनेट हुँदैन । अनि फेरि अल्छिपनाले छोप्दै ल्याउँछ, यसरी एउटा फुर्सदको समयपनि त्यसै हराएर जान्छ । बत्ति र इन्टरनेटबिच तालमेल नमिल्दा पनि, मोबाइलबाट बेलाबेलामा ट्विटरमा चियाउन चाँहि भ्याइरहेकोहुन्छ । खै, यो कस्तो व्यस्तता? हिजो र आज पानी नपरेको भए, अनि आज
Bulbul : Episode - 181 [भ्यालेन्टाइन डे विशेष]
Aakar February 13, 2013
Listen to Bulbul Episode-181 सम्बन्धहरु स्वर्गबाटै बनेर आएका हुन्छन् (Relations are made from heaven)। यो वाक्यलाई पुष्टि गर्ने हाल अमेरिका रहेकी एउटी नेपाली युवतीको वास्तविक प्रेम कथा आजको बुलबुलमा । शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Happy Valentine
भ्यालेन्टाइन डे [कथा]
Aakar February 07, 2013
(प्रेम दिवस या भनौँ भ्यालेन्टाइन डे आउन एकहप्ता बाँकी छ । यसै सेरोफेरोमा आज हामीले साथी निशांकको “भ्यालेन्टाइन डे” नामक कथा प्रकाशित गरेकाछौँ । - आकारपोष्ट) अ स्ति ट्वीटरमा अनन्त सरले ‘मेन्सन’ गरेपछि बल्ल धेरै भएछ नलेखेको जस्तो ‘फिल’ भयो। अझ सरले #Feb लागेछ भन्नु भयो, सार्‍है घत लाग्यो। कतै म पनि भर्खर बैंसले छोएका अनि भ्यालेन्टाइन-डेको व्यग्र प्रतिक्षा गर्दै बसेका फुच्चे लभरब्वाइहरु जस्तै देखिएको पो छु कि जस्तो लागेर आयो। भित्रभित्रै त हल्का प्रतीक्षा त जसले पनि गर्छ, नदेखियोस् भन्ने मात्र मनसाय हो। यो कुरामा मै मात्र बिटुलो छुइन होला, यहाँ जम्मै सिंगल उस्तै परे मिङ्गलहरु पनि ‘फोट्टिन फेब्रुअरी’ कहिले आउला र प्रपोज गरौँला/गर्लान भनेर 'फिंगर क्रस' गरेर बसिरहेका होलान्। होलान् के भन्नु, छन् नै। नेपालमा यसरी चर्कै भ्यालेन्टाइन मनाउन थालिएको कहिले देखि हो कुन्नि, मैले चाहिँ डाइरेक्ट कलेज पुगेपछि यो घटना र 'हेल्लो पुजा, के छ मैया' गीत सुनेपछि बल्ल थाहा पाएको हूँ। सानैमा एसएलसी पास गरियो, स्कुलमा जसरी कलेजमा पनि सँधै फुच्चे मै गनिइयो, फुच्चेहरुलाई कसैले हेर्दारहेनछन्।